admin – Page 152 – Agri Digit News
ပဥ္စမအကြိမ် မျိုးစေ့ကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အမျိုးသားအဆင့်ဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ။
Posted on 2019-05-16 2019-05-16 Author admin
ဒုတိယအကြိမ် Coffee Forum ကို မန္တလေးတွင်ကျင်းပ၊ ဒုတိယသမ္မတ ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူ တက်ရောက်အဖွင့်အမှာစကားပြောကြား။
Posted on 2019-05-15 2019-05-16 Author admin
စိုက်-မွေးသုတ မြန်မာဂျီအေပီ GAP
Posted on 2019-05-15 2019-05-15 Author admin
အောင်လံမြို့နယ် တွင် နို့စားနွားမွေးမြူခြင်းအတွက် လက်ဆင့်ကမ်းဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့် ရန်ပုံငွေပေးအပ်
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး သရက်ခရိုင် အောင်လံမြို့နယ် မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန၏ နို့စားနွားမွေးမြူရေးအတွက် ပထမအကြိမ် လက်ဆင့်ကမ်းဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့် ရန်ပုံငွေပေးအပ်ပွဲ အခမ်းအနားကို မေလ(၁၄)ရက် နံနက်(၈)နာရီအချိန်က အဆိုပါဦးစီးဌာနရုံးခန်းမတွင်
Posted on 2019-05-15 2019-05-23 Author admin	Comments Off on အောင်လံမြို့နယ် တွင် နို့စားနွားမွေးမြူခြင်းအတွက် လက်ဆင့်ကမ်းဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့် ရန်ပုံငွေပေးအပ်
တန့်ဆည်မြို့နယ်၌ သဖန်းဆိပ်ဆည်ရေဖြင့် နွေစပါးဧက(၃)သောင်းကျော်စိုက်ပျိုး
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေဘိုခရိုင်၊ တန့်ဆည်မြို့နယ်တွင် ယနေ့အချိန်အထိ သဖန်းဆိပ်ဆည်ရေဖြင့် နွေစပါးဧက ၃၂၉၆၈ စိုက်ပျိုးပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Posted on 2019-05-15 2019-05-15 Author admin	Comments Off on တန့်ဆည်မြို့နယ်၌ သဖန်းဆိပ်ဆည်ရေဖြင့် နွေစပါးဧက(၃)သောင်းကျော်စိုက်ပျိုး
ငှက်ပျောစိုက်တောင်သူများသတိထားစရာ ငှက်ပျောဖျူစေရီယံပင်ညှိုးရောဂါFusarium oxysporum f.sp. cubense – Foc:TR-4
ငှက်ပျောဖျူစေရီယံပင်ညှိုးရောဂါသည် ငှက်ပျောပင်တွင်ကျရောက်သောရောဂါများအနက် ဖျက်ဆီး မှု အကြီးမားဆုံးနှင့် ပျက်စီးမှုအများဆုံးဖြစ်စေသော ရောဂါတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းရောဂါသည် မြေဆောင်မှို ဖြစ်သော မှို (Fusarium oxysporum f.sp. cubense: Foc) ကြောင့် ဖြစ်ပြီး ပနားမားရောဂါ ဟုလည်း လူသိများ ကြသည်။
Posted on 2019-05-15 2019-05-15 Author admin	Comments Off on ငှက်ပျောစိုက်တောင်သူများသတိထားစရာ ငှက်ပျောဖျူစေရီယံပင်ညှိုးရောဂါFusarium oxysporum f.sp. cubense – Foc:TR-4
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနက ကြီးမှူးကျင်းပသည့် Myanmar Coffee Forum 2019 ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားကို ယနေ့နံနက် ၉ နာရီတွင် မန္တလေးမြို့ရှိ Mercure Mandalay Hill Resort Hotel ၌ ကျင်းပရာ တောင်သူ လယ်သမား အခွင့်အရေး ကာကွယ်ရေးနှင့် အကျိုးစီးပွားမြှင့်တင်ရေး ဦးဆောင်အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် ဒုတိယသမ္မတ ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူ တက်ရောက်အမှာစကား ပြောကြားသည်။
Posted on 2019-05-15 2019-05-17 Author admin	Comments Off on ဒုတိယသမ္မတ ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူ Myanmar Coffee Forum 2019 ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက် အမှာစကား ပြောကြား